Wararka - BMW waxay dejisaa duufaan leh daabacaad xadidan oo Dark Shadow X7 SUV
BMW waxay dejisaa duufaan leh daabacaad xadidan oo Dark Shadow X7 SUV
BMW Australia waxay si adag u xadidi doontaa qoondeynta noocyada cusub ee X7 Dark Shadow Edition ee loo yaqaan 'xDrive30d iyo M50i', waxaana laga bilaabi doonaa gudaha bisha Maarso 2021, iyadoo leh shan kaliya oo nooc kasta ah.
BMW Shop waxay fududeeysaa boos celinta iyadoo u baahan lacag dhigaal ah $ 5,000, ka dibna amarka la dhigo oo la ogeysiiyo ganacsadaha uu doorbidayo macaamilka inuu la tashado ugu dambeynna wareejinta iyo gaarsiinta 2021.
BMW X7 Dark Shadow Edition waxay soo bandhigeysaa alaabada mashruucyada gaarka ah ee BMW markii ugu horeysay si ay u bixiso dareen amar la'aan ah. Waxay leedahay hal midab oo keliya. BMW Degdeg barafoobay Arctic Gray Metallic.
Muuqaalka xoogga leh wuxuu buuxiyaa V-Spoke 22-inch giraangiraha isku-darka iftiinka oo leh Jet Black matte dhameys ah.
Khadka tooska ah ee muuqaalka muuqaalka muuqaalka leh ee BMW oo leh waxyaabo la ballaariyey ayaa beddelaya dhammaystirka chrome si loo bixiyo aragti sare oo muuqaal ah, halka muraayadaha qorraxda ay kor u qaaddo muuqaalka cajiibka ah iyadoo la siinayo asturnaan dheeraad ah rakaabka kursiga dambe.
Midabada buluugga ah ee caanka ah ee 'M Sport brek brek' oo ay weheliso qaababka naqshadeynta buluugga ee 'X' ee nidaamka BMW Laserlight ayaa bixiya kala duwanaansho firfircoon.
Qolka X7 Dark Shadow Edition waxaa lagu gartaa qalab horumarsan iyo walxaha naqshadeynta u gaarka ah qaabkan. Waxay ku qalabeysan tahay kuraasta raaxada leh ee BMW waxaana lagu qurxiyaa midab jilicsan oo laba-midab leh oo Merino ah habeen buluug / madow iyo qaabab tolmo-heer sare leh.
Jihada hore ee qolka diyaaraduhu wuxuu ka tarjumayaa codadka qoto dheer ee hodanka ah ee cirka mugdiga ah, wuxuuna ka samaysan yahay BMW-ga gaarka loo leeyahay ee Walknappa maqaarka Habeenkii Buluuga ah qaybta sare ee dashboardka iyo dusha sare ee dusha sare.
Qalabka saqafka ah ee shakhsiyadeed ee loo yaqaan 'BMW' Alcantara oo leh muraayad buluug mugdi ah ayaa si tartiib tartiib ah ugu beddelaya alaab dhaqameedka iyadoo lagu darayo dareen wax hagaajin ah
Qalabka aluminium ee si xarago leh loo farsameeyay ayaa qurxinaya dusha sare ee BMW Individual'Fineline Black ', oo ah dhinaca koowaad ee BMW X7, kaas oo bixiya saameyn bilic leh oo bilic leh iyadoo la mideynayo labada qalab.
Tiknoolajiyadda soosaarka muraayadda muraayadda muraayadda muraayadda ah ee BMW ayaa lagu dabaqaa xulashada wareejinta, kantaroolaha iDrive iyo badhanka “Start / Stop”, iyadoo lagu darayo dareen xarrago iyo xarrago leh.
Calaamadda "Edition Dark Shadow" ee konsole dhexe waxay xaqiijineysaa gaar ahaanta qaabkan iyada oo lagu darayo saameyn qurxin tayo sare leh.
X7 Shadow Edition waa gaari aad loo amaanay oo loogu talagalay raaxada fasalka koowaad, darawalnimada heer sare iyo astaamaha maaraynta, iyo heer qalab heer sare ah, oo bixiya rafcaan iyo qalab bilic dheeri ah.
Mashiinka naaftada ah ee naaftada ah ee liita 6-silsilad ah ee shidaalka ah ee xDrive30d M Sport ayaa bixin kara 195kW iyo 620Nm oo awood ah, halka mashiinka M50i ee 4.4-litir 8-silsilad mataanaha-turbo shidaalka leh uu leeyahay 390kW iyo 750Nm.
Qiimaha Dark Shadow X7 waxaa loo dhigay $ 188,900 xDrive30d M Sport (baabuur) iyo $ 215,900 oo loogu talagalay M50i (baabuur). Boos celinta loogu talagalay Qoraalka Hooska Madoow waxaa gebi ahaanba laga sameeyaa khadka tooska ah iyada oo loo marayo Dukaanka BMW ee cusub, marka hore la imaanayo, marka horena loo adeego.
Ku soo dhowow qoraalada qiiqa Australiya. Kooxdayada suxufiyiinta xirfadleyda ah, qorayaasha iyo duuliyeyaasha tijaabada ah waxay u heellan yihiin inay ku siiyaan wararkii ugu dambeeyay ee gaariga iyo mootooyinka iyo dib u eegista, iyo sidoo kale talo aad ku kalsoonaan karto.
Waxaan taageersanahay hal-ku-dhigga bixinta fikrado daacad ah, anshax iyo caddaalad ah, waxaana rajeyneynaa in sheekooyinka aad aqrisay ay yihiin madadaalo, wargelin, mid gaar ah oo xiiso leh.